Kungani amanye amathayili ewa odongeni kalula ngemuva kokoma kokunamathela?
Kungani amanye amathayili ewa odongeni kalula ngemuva kokoma kokunamathela? Lapha ukukunikeza isisombululo esinconyiwe. Uke wahlangabezana nalenkinga yokuthi ithayili liwe odongeni ngemuva kokoma kokunamathela? Le nkinga yenzeka kaningi, ikakhulukazi ezindaweni ezibandayo. Uma uthayela usayizi omkhulu i ...
Iyini indima ye-hydroxyethyl cellulose kupende wamatshe wangempela?
I-Hydroxyethyl cellulose HEC uhlobo lwe-non-ionic, i-polymer powder engenakunyakaziswa ngamanzi eyenzelwe ukuthuthukisa ikhono lokusebenza kwezinsika ezixubile ezomile. Isetshenziswa kabanzi kumaPende odongeni lwangaphakathi nodonga lwangaphandle, upende wamatshe kanye nopende Wokulungiswa. Kulesi sihloko, ake sixoxe ngendima ye-HEC ku-r ...
Iyiphi i-redispersible polymer powder esetshenziselwa?
Imikhiqizo yempuphu ye-lateispersible Redpersible powder ingamanzi ancibilikayo, ahlukaniswe nge-ethylene / vinyl acetate copolymer, vinyl acetate / vinyl tertiary carbonate copolymer, acrylic acid copolymer, njll., I-powder eboshwe ngemuva kokumiswa kwesifutho Isebenzisa i-polyvinyl alcohol njenge-colloid evikelayo. ...
Yini i-redispersible polymer (latex) powder?
Umkhiqizo we-latex redispersible ungumpuphu omhlophe oncibilikiswa ngamanzi noma ocishe ube mhlophe, i-copolymer ye-f ethyle ethylene ne-vinyl acetate, ne-polyvinyl alcohol njenge-colloid evikelayo. Ngoba izimpushana ze-lateispersible redispersible zinekhono lokuxhuma eliphezulu nezakhiwo ezihlukile, ezinjengalezi: amanzi ...
Ungaluvuselela kanjani udaka lokuqeda odongeni oludala ngopende?
Engxenyeni yokuqala yokuhlukanisa, lapho upende usetshenziswa njengezinto zokuhlobisa ezindala zokulungiswa kodonga, into yokuqala okudingeka uyiqinisekise ukuthi ngabe upende osendlini yesisekelo sokuqala upende osuselwa emanzini noma upende osuselwa kuwoyela. Uma kungupende osuselwa kuwoyela, yonke imidwebo yakudala kumele ...
Isizinda esisha sokukhiqiza senkampani yakwaLongou - iHandow Chemical isematheni! Iphrojekthi yokutshalwa kwezimali yenkampani yakwaLongou, iHandow Chemical, ifake inqwaba yamathuba entuthuko — amabhange-ebhizinisi afinyelela ezindaweni eziningi ukusiza intuthuko ejwayelekile. Sebenzisa umfutho futhi ...
Siyakuhalalisela ngemfudumalo! Isizinda esisha sokukhiqiza senkampani yakwaLongou - iHandow Chemical isematheni!
Iphrojekthi yokutshalwa kwezimali yenkampani yakwaLongou, iHandow Chemical, ifake inqwaba yamathuba entuthuko — amabhange-ebhizinisi afinyelela ezindaweni eziningi ukusiza intuthuko ejwayelekile. Sebenzisa umfutho futhi uzuze zonke izinyathelo! Ake sibheke phambili kwinganekwane yesikhathi esizayo sikakhilimu wamakhemikhali okhulayo ...
Isiteshi esikhulu samandla kagesi emhlabeni esakhiwayo –iBaihetan Hydropower Station Dam sesizofinyelela phezulu.
Isiteshi esikhulu samandla kagesi esakhiwa emhlabeni - idamu lesiteshi samanzi iBaihetan sesizofinyelela phezulu. Akubanga khona ukuqhekeka kwezinga lokushisa selokhu kuqale ukuthululwa kwezigidi eziyi-8 m³! Isakhiwo esikhulu kunazo zonke emhlabeni esakhiwayo nesinzima kakhulu ukwakhiwa ...
Izinto zokusetshenziswa ezingamakhemikhali ziqala ukwanda kwentengo!
Izinto Zokusetshenziswa Kwekhemikhali Zisetha Ukunyuka Okusha Kwezintengo! Izinto zokuhluza eziningi zivaliwe! Uwoyela ongahluziwe wakhuphuka futhi washaya into entsha cishe ezinyangeni eziyi-13! Njengoba isimo sezulu esibandayo sidlulela eningizimu yeTexas, iTexas yonke inga ...
Ibhizinisi lethu lokumboza izwe selivele lingene esigungwini semakethe ukulwela impi
Izwe lethu lokumboza ibhizinisi selivele lingene esigungwini semakethe ukulwela impi Inzuzo iyona nhloso enkulu yenkampani yopende, kepha kulo makethe wokuncintisana wopende, ungama kanjani? Lokho ukuqonda ukukhula kwe ...
Imakethe ye-Methacrylic acid iyonke izohlala isebenza phezulu
Imakethe ye-Methacrylic acid iyonke izohlala isebenza phezulu Muva nje, imakethe yonke yasekhaya ye-methacrylic acid ikhombise ukuthambekela kokuphokophela phezulu, ukugxila kokuhweba okuphelele emakethe kuyaqhubeka nokukhuphuka, futhi endaweni ...
Ama-antibacterial powder enamathela emakethe amathemba angalindeleka
Izwe lethu lokumboza ibhizinisi selivele lingene esigungwini semakethe ukulwela impi Ngokuya ngocwaningo lwakamuva olwenziwe ngabamakethe nezimakethe, imakethe yomhlaba wonke yokumbozwa kwama-antibacterial powder izoba cishe ngama- $ 1.5 billion ngo-2020 futhi ifinyelele ...